ka bogo Nuxurka kujira warmurtiyeedka shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Brussels | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA ka bogo Nuxurka kujira warmurtiyeedka shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Brussels
ka bogo Nuxurka kujira warmurtiyeedka shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Brussels
Muqdisho (SNTV);- Shirki iskaashiga somalia iyo beesha caalamka ayaa waxaa lagasoo saaray warmurtiyeed ay isku raaceen dhinacyadii ka wada qeybgalay shirka, kaas oo koobaya dhammaan qodobadi looga hadlay shirka, waxaana ka mid ah;-
1.Si kastaba ha ahaatee, horusocodka Soomaaliya iskama iman karo. Awoodda hay’adaha dawladda waa in la xoojiyaa, sidoo kalena waa in la abuuraa hannaan isla-xisaabtan oo taageeraya horumarka mustaqbalka. Waxa aan garawsannahay in ay jiraan halisyo carqaladayn kara horumarka hadda la gaaray ee Soomaaliya.
Dhibaatooyinka ay kamid yihiin kooxaha hubaysan ee abuurmaya, xagjirnimada gacan-ka-hadalku la socdo, isbeddelka cimilada, tartanka aan nidaamsanayn ee loogu jiro awoodda iyo khayraadka, caddaalad la’aanta iyo musuqmaasuqu waxa ay halis ku yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Dadaal kasta waannu samaynaynaa si aan u fashilinno ugana hortagno kuwa doonaya inay carqaladeeyaan horumarka Soomaaliya ee ku aaddan dib-u-heshiisinta, nabadda iyo barwaaqada.
Waxaan soo dhawaynaynaa heshiiskii dhaxalgalka ahaa ee dhexmaray dawladda Federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah, kaas oo waddada u xaaraya in la qoro, la iska talageliyo lana meelmariyo sharciga doorashada sannadka 2018 gudihiisa. Tani waxa ay noqon doontaa tallaabo weyn oo loo qaaday in markii ugu horreysey ilaa iyo 1969-kii la gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ah sannadka 2020. Waxa aan hoosta ka xarriiqaynaa in Soomaaliya u baahan tahay dastuur dhammaystiran oo la meelmariyey kaasi oo waddanka u suurtagelin kara hannaan siyaasadeed oo waara.
Waxaynu cambaaraynaynaa kana xunnahay dadka naftooda ku waaya weerarrada argagaxisada ee joogtada ah iyo dagaallada kale ee waddanka ka dhaca. Waxa aannu ka midaysannahay go’aankayaga la-dagaalanka argagaxisada, oo aannu qabno inaan ciidan ahaan uun loola dagaalamine, siyaabo kala duwan loola diriro. Siyaabahan waxa kamid ah in meesha laga saaro waxyaabaha sababa argagaxisnimada iyada oo la xoojinayo hannaanka sharci iyo caddaalad ee dalka, la dhawrayo xuquuqda bani’aadamka, la adkaynayo dawladnimada, dhallinyarada la hagradayna loo suurtagelinayo fursado dhaqaale iyo mid bulsho.
25.Waxa aannu hoggaanka Dawladda Federaalka Soomaaliya ku bogaadinaynaa inay dejiyeen Qorshihii kalaguurka iyaga oo si dhaw u kaashanaya dawladaha xubnaha ka ah Fedaraalka, AMISOM, waddamada ay Ciidamada iyo Booliisku ka joogaan Soomaaliya iyo saaxiibbada kale ee caalamka.
31.Waxa aannu ogsoonnahay in hirgalinta Qaab-dhismeedka Amniga Qaranka iyo Qorshaha kalaguurka uu u baahan yahay doonis siyaasadeed iyo taageero buuxda oo ka timaadda dhammaan dhinacyada ay khusayso.
Waxa aannu hoosta ka xarriiqaynaa muhiimadda ay leedahay in khayraad loo qoondeeyo ammniga dalka. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ka go’an inay xoojiso hannaanka maamulka maaliyadda dawladda.Dawladdu waxa ay saaxiibbadeeda caalamiga ah uga mahadcelinaysaa taageerada ay siiyaan waaxda amniga dalka.
Waxa aannu soo dhawaynaynaa dadaallada Dawladda Federaalka Soomaaliya ay kula tacaamulayso hoggaamiyayaasha kooxaha hubaysan iyo kuwa iskood u doortay inay dagaalka joojiyaan isla markaana ay ka go’an tahay dib-u-heshiisiinta iyo in meesha laga saaro waxyaabaha ka qayb qaadanaya xagjirnimada. Waxa aannu dawladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqaynaa inay sii waddo taageerada, daryeelka, dhaqan-celinta, siideynta iyo dib-ugu-celinta bulshada ee dadka ka soo goosta kooxaha hubaysan.Halkan marka la joogo, waxa aannu ku baaqaynaa in fiiro gaar ah la siiyo caruurta iyo dhallinyarada ka qayb qaatay dagaallada, kuwaas oo ay tahay in loola dhaqmo sidii dad dhibbanayaal ah, laa siiyo taageerada iyo daryeelka ay u baahan yihiin si ay bulshada dib ugu dhexgalaan.
Waxa aannu taageersannahay qorsahaha uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya hormuudka ka yahay ee dib loogu nidaaminayo lacagta dalka, taasi oo mudnaan u leh Dawladda Federaalka Soomaaliya. Waxa aaannu aaminsannahay in lacagta cusub ee dalka loo soo daabacayo ay saamayn la taaban karo ku yeelan doonto horumarka dhinaca lacagta ee dalka, isla markaana ay midayn doonto hannaanka lacag-bixint, midaas oo xoojin doonto midnimada dalka.Waxa aannu ogsoonnahay baahida loo qabo in la helo kharashka lagu soo daabacayo Shilinka Soomaaliga wajigiisa koowaad, waxa aannuna dhammaan dhinacyada kala duwan ugu baaqaynaa inay taageeraan hawshan.
Dawladda Federaalka Soomaaliya, deeq-bixiyayaasha iyo waaxda ganacsiga gaarka ah (private sector), waxa ay ogsoon yihiin doorka ay hay’adaha maalgeliya horumarku ka ciyaari karaan taageeridda dib-u-dhiska iyo sookabashada Soomaaliya.
Waxa aannu aqoonsannahay dadaalka ballaaran ee ay Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah, Soomaalida waddanka gudihiisa ku dhaqan, kaalinta weyn ee Soomaaliya iyo beesha caalamku ka geysteen abaartii Soomaaliya ka dhacday 2017. Waxaannu sidoo kale ogsoonnahay inay jiraan dad gaaraya 5.4 milyan oo gudaha Soomaaliya ku dhaqan kuwaas oo u baahan gargaar bani’aadamtinnimo, ilaa 2.5 milyan kamid ah dadkaasi waxa ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah si ay u helaan baahiyahooda asaasiga ah iyo cunto. Waxa sidoo kale jira dad gaaraya ilaa2.6 milyan oo gudaha Soomaaliya ku barakacay, kuwaas oo u baahan kaalmo kala duwan. Dadka reer miyiga ah ee Soomaaliya ku dhaqan ayaa sidoo kale u baahan gargaar degdeg ah si ay noloshooda dib ugu dhisaan maaddaama ay duunyo badan khasaareen.
Waxa aan bogaadinaynaa dadaalka Dawladda Federaalka Soomaaliya, dawlad goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka, Maamulka Gobolka Banaadir, (BRA)ay ku xoojinayaan nidaamyada heer qaran ee isku-xirka dadaallada lagu maaraynayo masiibooyinka dabiiciga ah, taasi oo ay kamid tahay samaynta Hay’adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka iyo in la xooojiyo hay’adihii hore u jirey. Sidaasi awgeed, waxa aannu soo dhawaynaynaa dejinta siyaasadda Maaraynta Masiibooyinka, waxa aannuna ku baaqaynaa in la dardargeliyo fulinteeda.
Waxa aannu aqoonsannahay dadaallada joogtada ah ee Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah, Maamulka Gobolka Banaadir(BRA)ay wax kaga qabanayaan matelaadda iyo ka-qaybqaashada haweenka ee arrimaha siyaasadda iyo dawladda, oo ay kamid tahay inay xilal hoggaamineed qabtaan. Waxa aannu hoggaanka Soomaaliya ugu baaqaynaa inay sameeyaan shuruuc haweenka ka caawinaya inay helaan matalaad, qaybna ka noqdaan hoggaanka dalka, xilal sarsarena ka qabtaan xafiisyada dawladda, kuwa la iska soo doorto iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladdda.
Previous articleSoomaaliya maxay uga dhigantahay ku biiritaanka COMESA?
Next articledareen iyo argagax laga muujiyey gabar 10 jir ah oo ugeeriyootay gudniinka fircooniga ah